Iindaba -Ulindelo lophuhliso lweglasi yebhiya kunye nebhotile yewayini ..
Ukuphuhliswa kwethemba lebhiya yeglasi kunye nebhotile yewayini ..
Iibhotile zeglasi kwaye izikhongozeli zisetyenziswa ikakhulu kwimizi-mveliso yotywala nakwisiselo esingesiso isiselo esinxilisayo, esinokugcina inertia yemichiza, ukungachumi kunye nokungagqibi. Ixabiso lentengiso leebhotile zeglasi kunye nezikhongozeli kwi-2019 ngama-60.91 ezigidigidi zeedola zaseMelika, ekulindeleke ukuba ifike kwi-77.25 yezigidigidi zeedola zaseMelika ngo-2025, kunye nenqanaba lokukhula konyaka phakathi ko-2020 no-2025 yi-4.13%.
Ukupakishwa kwebhotile yeglasi kunokuphinda kusetyenziswe kwakhona, nto leyo eyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokupakisha izinto ngokwembono yendalo esingqongileyo. Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona iitoni ezi-6 zeglasi kunokugcina ngokuthe ngqo iitoni ezi-6 zezixhobo kunye nokunciphisa itoni enye ye-CO2.
Enye yezinto eziphambili eziqhubela phambili ukukhula kweemarike zebhotile kukonyuka kokusetyenziswa kwebhiya kumazwe amaninzi. Ibhiya yenye yeziselo ezinxilisayo ezipakishwe kwiibhotile zeglasi. KusebumnyameniIbhotile yeglasiukugcina imixholo. Ukuba ezi zinto ziveliswe kukukhanya kwe-ultraviolet, zinokuwohloka ngokulula. Ukongeza, ngokweMicimbi yeShishini le-NBWA kwi-2019, abathengi abaneminyaka engama-21 nangaphezulu e-United States basebenzisa ngaphezulu kwe-26.5 yeelitha zebhiya kunye ne-cider ngomntu ngamnye ngonyaka.
Ibhotile yeglasisesinye sezinto zokupakisha ezingcono kwiziselo ezinxilisayo (ezinje ngemimoya). Isakhono seebhotile zeglasi zokugcina ivumba kunye nencasa yeemveliso ziqhuba imfuno. Abathengisi abahlukeneyo kwiimarike baye baqaphela ukukhula kweemfuno zoshishino lwemimoya.
Ibhotile yeglasi yinto elungileyo neyaziwayo yokupakisha kwewayini. Isizathu kukuba iwayini akufuneki ibekwe elangeni, kungenjalo iya konakaliswa. Ngokwedatha ye-OIV, ukuveliswa kwewayini kumazwe amaninzi kwakuyi-292.3 yezigidi zeelitha kunyaka-mali ka-2018.
Ngokwe-United Nations wine Association, ukutyiwa kwemifuno yenye yeendlela ezingcono nezikhawulezayo zokuphuhla kwewayini, nekulindeleke ukuba kuboniswe kwimveliso yewayini. Oku kuyakukhuthaza ukuvela kwewayini yemifuno enobubele, ngenxa yoko inani elikhulu leebhotile zeglasi ziyafuneka.